Home Wararka Ciidan ka Tirsan Guutada Gorgor oo Dhuusamareeb lagu Dilay.
Ciidan ka Tirsan Guutada Gorgor oo Dhuusamareeb lagu Dilay.
Bartamaha magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug waxaa lagu dilay laba kamid ah Ciidamada Gorogor ee kal hore dowladda Soomaaliya halkaasi geeysay, waxaana dilay Ahlu-Sunna oo la sheegay onay bilaabeen werrarro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah.
Wararka la helayoDhuusamareeb ayaa sheegaya in ragga hubeysan ay ka tirsan yihiin xoogaga Ahlusunna, isla markaana weerarka kadib ay horay usii qaateen Gaari Cabdi Bille ah oo ay la aadeen dhinaca degaanka Bohol.
Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegay in Gaariga Cabdi Billaha ah markii hore laga soo qaatay xoogaga Ahlusunna balse ay dib ula wareegeen, iyaga oo dilay qaar kamid ah askartii wadatay Gaariga.
Afhayeenka Maamulka Caasimadda Dhuusamareeb Bashiir Maxamed Salaad Sanka ayaa sheegay in Dilka askarta qaranka ee kadhacay Dhuusamareeb uu yahay mid argagixiso lagu yaqaanay kooxda Al-Shabaab.
laamaha Amniga Magaalada Dhuusamareeb ayaan weli faah faahin ka bixin falka dilka Askarta Maalinta cad loogu geystay Magaalada Dhuusamareeb oo ah Caasimadda Galmudug.
Next articleDabageed oo Ku dagaallamaya iyo Guudlaawe oo Diiday Cid u Xerista Kuraasta Baladweyne.
Danjire Cabdiraxmaan Sheekh Ciise oo jawaab kulul ka bixiyay warsaxaafadeedkii Wasiirka...
(Daawo) Kulankii Baarlamaanka ee maanta oo Fowdo isku badalay, Farmaajana lagu...